Wasiir Bartlett: Jamaica waxay kobcineysaa awoodda baaritaanka COVID-19 si ay u daboosho baahida kordhay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiir Bartlett: Jamaica waxay kobcineysaa awoodda baaritaanka COVID-19 si ay u daboosho baahida kordhay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhammaan booqdayaasha yimaadda Jamaica waxay awood u yeelan doonaan inay galaan marinnada imtixaannada la oggolaaday si ay ugu suurtagasho inay buuxiyaan shuruudaha dalalkooda ee dib-u-soo-galista
Wasiirka Dalxiiska, Edmund Bartlett ayaa shaaca ka qaaday in Jamaica ay xoojisay kaabayaasheeda tijaabada ee COVID-19 si ay u daboosho baahida sii kordheysa ee tijaabooyinka noocan oo kale ah, oo ay wadaan shuruudaha safarka ee cusub ee suuqyada waaweyn ee ilaha dalxiiska.
Jamaica hadda aad ayey diyaar u tahay. Waxaan soo saarnay kaabayaal si aan u hubino tirada wakiilada baaritaanka iyo ama ama awood u siinta hababka baaritaanka fayraska ee ay ansixiyaan hay'adaha ay khuseyso. Marka, dhammaan booqdayaasha yimaadda Jamaica waxay awood u yeelan doonaan inay galaan nidaamyo imtixaanno la ansixiyay si ay awood ugu yeeshaan inay buuxiyaan shuruudaha dalalkooda ee dib-u-soo-galista, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Tani waxay daba socotaa amarkii dhowaan ay soo saartay Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), oo u baahan caddaynta natiijada baaritaanka COVID-19 ee xun ee rakaabka diyaaradaha u safraya Mareykanka. Shuruudo la mid ah ayaa horey u soo bandhigeen dowladaha Canada iyo UK, taas oo looga baahan yahay dhammaan dadka u duulaya dalalkaas inay soo bandhigaan natiijooyin tijaabo oo taban si loo fududeeyo gelitaanka ama looga fogaado is karantiil.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in hagaajinta qaabka imtixaanka ay wadeen howlwadeenada gaarka ah ee uu dhowaan soo saaray si ay hormuud ugu noqdaan dadaalada lagu xoojinayo awooda tijaabinta Jamaica ee COVID-19. Kooxda ayaa sidoo kale abuurtay nidaam fududeynaya howsha booqdayaasha.
Kooxda howshu waxay qabatay shaqo badan. Kuwaas oo ay ka mid yihiin qaadista tillaabooyin lagu qiimeynayo laguna go'aaminayo awoodda looga jawaabayo baahida loo qabo baaritaanka dhammaan booqdayaasha ku laabanaaya dalkooda waxaanan ku faraxsanahay in aan idhaahdo shaqadaa waa la dhammaystiray Waxaan awoodnaa inaan si wanaagsan u soo tabinno in shaybaarradu dhammaantood la aqoonsan yahay oo la kheyriyay, ”ayuu yiri wasiirku.
Waxaan sidoo kale diyaarinay laba qorshe oo shaqo ka joojinta ah. Waxay ku yaalliin goobo ku dhow labada garoon diyaaradeed ee Montego Bay iyo Kingston, ”ayuu yiri wasiir Bartlett.
Goobaha imtixaanku sidoo kale waxay ku yaalliin dhammaan hudheelada waaweyn ee dalka, qabanqaabada gaadiidka ayaa diyaar ah si loo fududeeyo u soo guuritaanka martida xarunta imtixaanka ugu dhow, haddii aan midkoodna laga helin guriga. Booqdeyaasha sidoo kale waxay heli doonaan ikhtiyaar ay ku bixiyaan kharashka imtixaanada kahor imaatinkooda xarumaha.
Wasiirka ayaa sidoo kale la wadaagay in siyaasad loo dejinayo dadka soo booqda ee tijaabiya wax togan ka hor inta aysan ka dhoofin jasiiradda. Soo-booqdayaasha tijaabiya waxtarka, waxaan u haynaa barnaamij daryeel wanaagsan oo la qaabeynayo. Hoteellada ayaa noqon doona jawaabeyaasha ugu horreeya iyaga oo u oggolaanaya martida in ay ku sii sugnaadaan guryaha aag loogu talagalay muddadaas oo dhan, gaar ahaan haddii ay yihiin kuwo aan astaan ​​lahayn, si ay u buuxiyaan shuruudaha si ay ugu suurtagasho in ay dib ugu noqdaan guryahooda,
Wasiirka ayaa sidoo kale sharaxay in shuruudaha cusub ee safarka ay culeys yihiin. Shuruudahaan cusubi waa kuwo aad u dhib badan oo horeyba waxaa noo caqabad ku ahaa borotokoolladii jiray. Kuwa cusub culeyskaas uun bay ku sii daraan. Waxay kor u qaadeysaa kharashka waxayna yareynaysaa mugga, waxayna yeelan doontaa saameynno marka la eego jiritaanka hay'adaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, waxa aan saameyn ku yeelan waa tayada iyo heerka waayo-aragnimo sare ee Jamaica ay bixiso. Waxaan wali nahay meesha ugu wanaagsan ee la booqan karo, ”ayuu yiri Wasiirka.
Hawsha gaarka ah waxaa hogaaminaya Wasiir Bartlett waxaana ka mid ah Madaxweynaha Jamaica Hotel iyo Dalxiiska Ururka (JHTA), Clifton Reader; Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee hudheelka Caribbean and Dalxiiska Association (CHTA) iyo Madaxweynihii hore ee JHTA, Nicola Madden-Greig; Guddoomiyaha Shirkadda Horumarinta Wax soo saarka Dalxiiska (TPDCo), Ian Dear; Guddoomiye ku-xigeenka Kooxda Sandals-ka ahna Guddoomiyaha Golaha Shabakadda Isku xidhka Dalxiiska, Adam Stewart; Agaasimaha Fulinta ee 'Chukka Caribbean Adventures' iyo Guddoomiyaha kooxda maaraynta marinnada marinnada leh ee COVID-19, John Byles; iyo Lataliyaha Sare iyo Istiraatiijiyadda Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright.
Guddidan ayaa la shaqeysa Wasaaradda Caafimaadka iyo Caafimaadka iyo daneeyayaasha dalxiiska, kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Soo-booqdayaasha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay hubiyaan shabakadda Guddiga Dalxiiska Jamaica (www.visitjamaica.com) iyo sidoo kale bogga Wasaaradda Caafimaadka iyo Caafimaadkawww.moh.gov.jm) wixii cusbooneysiin ah ee ku saabsan qabanqaabada imtixaanka iyo tasiilaadka la ansixiyay.